Arki Biishooppiin waldaa Orotodoksii Itiyoophiyaa 12, kanneen kutaa lallabaa kaaba Ameerika Fulbaana 17 fi 18, gorsitoota, miseensota mana maree bakka bu’oota Itiyoopiyaa, ripaablikaanota ja’aa fi dimokraatota shan kanneen keessaa 9 seneteroota yoo ta’an 2 immoo miseensa mana maree akkasumas angawoota ministrii dhimma alaa akkasumas kan dhaaba misooma gargaarsa Yunaayitid Isteetis kan USAID, waliin wal arganii mari’atanii jiran. Bakka buutonni isaanii Phaaphaasiiwwan kun, Itiyoopiyaan kurna sadan darban keessa hookkarri gosaa fi amantii hamaan ishee mudate jechuun gaddaan dubbatanii jiru. Dhiyeenya immoo guutummaa biyyattii keessatti jeeqamni ka’e kan isaan yaaddesse ta’uus dubbatanii jiran.
Amantii fi gosa isaanii utuu adda hin basin haleellaalee gara jabinaa lubbuu namoota nagaa galaafataa jiran mormuu dhaaf deggersa bakka bu’oota kanaa barbaaduuf dhufuu isaanii illee dubbataniiru.
Wal waraansaa fi badiisa naannoo Amaaraa fi Affaar akkasumas rakkoo namoomaa Tigraay keessaa ilaalchisee yaaddoo qaban illee angawoota Yunaayitid Isteetis kanaaf ibsuu isaanii VOAf ibsanii jiran.
Naannoo sana keessatti balaa namoomaa dandammachuu hin dand’amne ta’uu angawoota ministrii dhimma alaa waliin haala Itiyoopiyaa kan yeroo irratti marii geggeessaniin haala Itiyoopiyaa keessaa kan ammaa jijjiiruuf, kan gargaarsa namoomaa Tigraayiin dhaqutti danqaa ta’e, walii galteen lola dhaabinsaa fi mariin geggeessamuu qaba ka jedhu tuqanii jiru.
Baatii waxabajjii bara 2021 mootummaan federaala Itiyoopiyaa lola dhaabinsa gam tokkee erga labsee booda, humnoota TPLFn kan tuqatame haleellaa waraanaa illee balaaleffataniiru. Phaaphaasiiwwan kun. Bulchiinsi Baayiden, Itiyoophiyaa ilaalchisee imaammata daran madaalawaa fi kan haqaa akka qopheessuu akka qabuu fi hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaan gidduu jiru akka heegu gaafataniiru.
Gareen kun karaa dhaaba isaa kan bu’aaf hin hojjenneef US keessa maadheffateen $400,000 walitti qabuu dhaan gargaarsa Meqelee, Metekel fi Axaayee keessaaf ooluuf gumaachee jira.
Itti dabaluu dhaanis Itiyoopiyaa adabuuf kan irratti mari’atamaa jiru, Itiyoophiyaan seera daldalaa kan carraa fi guddinaa biyyoota uffee Sahaaraa gad gabaa Ameerikaa keessatti hirmaatan gochuuf bara 2020 keessa mana maree Yunaaytid Isteetisiin ba’e (AGOA) keessatti hirmaannaan ishee akka haara’u barbaachisaa ta’uu illee mari’atanii jiran. Walitti bu’iinsa biyyattii keessaaf angawoonni Yunaatitid Isteetis tattaaffii furmaata nageenyaa keessatti mootummaa Itiyoopiyaa akka deggeran illee waamicha dabarsaniiru.